Mashandisiro Anoita Interpol Yemagariro Midhiya | Mabasa eInterpol & Interpol Notices
Mashandisiro Anoita Interpol Yemagariro Midhiya
Mabasa e INTERPOL
Zvemagariro midhiya rave chinhu chakakosha muhupenyu hwedu. Ruzhinji rwevagari vepasi rese vanoshanda kanenge kamwe chete pasocial media platform. Muchokwadi, ongororo ichangoburwa yakaratidza kuti zvingangoita 3.6 bhiriyoni pasi rose shandisa magariro. Nekudaro, huwandu hukuru hwevashandisi hwakatungamira kumasangano mazhinji achitora vezvenhau kuti vaite mamwe emabasa avo. Pakati pemasangano aya pane International Criminal Police Organisation (INTERPOL).
Tisati tapinda mune iyo INTERPOL, iro rakakura pasangano remapurisa, rinoshandisa masocial media, ngatitangei tione kuti chii chinonzi INTERPOL.
The International Criminal Police Sangano (INTERPOL) isangano rezvematongerwo enyika iro rinoumbwa 194 nhengo dzenyika. Iyo ine dzimbahwe rayo iri muLyon, Singapore. Sangano rinonyanya kushanda nemapurisa enhengo dzenyika kuti vadzikise zviitwa zvematsotsi padanho repasi rose.
Ivo vanokwanisa kuzadzisa izvi nekugonesa mapurisa emapoka enhengo kuti agovane nekuwana dhata pamatsotsi nematsotsi. INTERPOL yakagadzira sisitimu iyo madhipatimendi emapurisa munyika dzenhengo anogona kugovana yakadaro data.
Mune yega yega yenhengo dzenyika, INTERPOL ine National Central Bureau (NCB). Iri Bureau rinoshanda senzvimbo yekubata yeGeneral Secretariat yesangano nemamwe maNCB. Chekupedzisira, INTERPOL ine yepamusoro soro rinotonga. Mutumbi uyu ndiwo General Assembly unosanganisira vamiriri vanobva kunyika dzakasiyana nhengo. Interpol inozivikanwa nekuferefetwa kwayo kwepasirese nekubatana pamatanho, uye mazhinji emakesi makuru ematsotsi. Sangano rinoshandisa maturusi akasiyana siyana emagetsi mukuferefeta kwayo.
INTERPOL inotamba akawanda akakosha mabasa sesangano repasi rese Aya mabasa anowanzo shanda kusimbisa chimiro chekuchengetedza chenhengo dzenyika. Zvinosanganisira:
Kuchinjana data: Iyo INTERPOL inopa mukana kune ayo maNCBs munyika dzakasiyana siyana kugovana data. Iyo NCB yenhengo yega yega yenyika inotaurirana kuburikidza nechengetedzo yekutaurirana chiteshi nedzimwe NCBs. Izvi zvinovimbisa kuti zviito zvavo nemabasa zvakaenzana.
Semuenzaniso, kana nyika ikaisa ona kuti munhu ari kudiwa, dzimwe nyika dzinenge dzichitsvaga munhu wacho. Izvi zvinogoneka nekuda kwekuchinjana kwedata.
Parizvino, INTERPOL ine angangoita Mamiriyoni makumi mapfumbamwe akagovaniswa marekodhi mune dhatabhesi yayo.
Kubatsira mapurisa munyika dziri nhengo: Interpol ndeyekugadzira nzira yemapurisa enyika dzinoverengeka kuti vabatsirane. Izvi zvinogona kuve munzvimbo yekudzidzira, forensics, dhatabhesi, uye zvaunoda. Izvi zvinoona kuti mapurisa munyika dzakasiyana anogona kuita basa ravo nemazvo.
Kuchengetedza kuchengetedzeka kwepasirese: Chinangwa chekutanga che INTERPOL ndechekuchengetedza chengetedzo yepasi rose nekubatanidza nharaunda dzenyika dzese. Izvi zvinobva zvasimbisa kutevedzwa kwemitemo yenyika. Izvi zvinovapa kugona kuzadzisa zvinangwa zvavo, kusanganisira kudzikisira kutengesa zvinodhaka, mhosva dzepamakomputa, kubiridzira mari, hugandanga, uye nezvimwe.
Nekuzadzisa zvinangwa zvavo, ivo vanogadzira yakachengeteka yepasi rose nzvimbo isina zvishoma kune zvisiri pamutemo zviitiko.
Kubatanidza zviwanikwa: INTERPOL inogadzira mukana wekuunganidza uye kugovera zviwanikwa. Izvi zviwanikwa zvinobatsira nyika dzinozvishaya, kunyanya zviwanikwa zvemari. Imwe yenyika dzenhengo inopa imwe mari sezvakataurwa neMusangano Mukuru. Veruzhinji vanogonawo kupa kusangano nekuzvidira.
Zvemagariro enhau zvakaratidza kubatsira kweInternational kana chero inomiririra mutemo mukutamba kwavo. Nerubatsiro rweSocial media, INTERPOL inogona kuita zvinotevera:
Batanidza neruzhinji: INTERPOL iri pasocial media network senge Instagram, Twitter, uye zvavanofarira. Chinangwa cheichi ndechekubatana neruzhinji, kupfuudza ruzivo, uye kugamuchira mhinduro.
Zvakare, aya mapuratifomu anogonesa veruzhinji kumhan'arira chero munhu kana boka rinofungidzirwa kuti rinopinda mune zvisiri pamutemo zviitiko.
Subpoena: Zvemagariro enhau zvakabatsira mukutsvaga matsotsi anodiwa. Nerubatsiro rwembambo, iyo INTERPOL inogona kufumura matsotsi anovanda kuseri kwemazita enhau enhau uye maakaundi
Sabhuku inopihwa mvumo nedare remutemo kuti iwane ruzivo, kunyanya zvakavanzika, kuitira zvinangwa zviri pamutemo.
Track nzvimbo: Zvemagariro venhau zvaita kuti zvikwanisike kuti INTERPOL itore nzvimbo yevasungwa. Kuburikidza nekushandiswa kwemifananidzo, mavhidhiyo zvinokwanisika kuti INTERPOL itaridze nzvimbo chaiyo yevari kufungidzirwa. Izvi zvave zvichishandiswa mukutevera kunyangwe makuru matsotsi syndicates nekuda kwenzvimbo yekumaka.
Mamwe midhiya enhau senge Instagram zvikuru anoshandisa nzvimbo yekumaka, zvichiita kuti zvive nyore kuti vatevedze mutemo vawane humbowo hwemifananidzo.
Sting Kushanda: Iri izita rekodhi rekushanda uko vatevedzi vemutemo vanohwanda kuti vabate tsotsi red-ruoko. Iyi nzira imwechete yakashandiswa pasocial media uye yakaratidza kushanda.
Vezvemitemo vanokwanisa kushandisa zvisiri pamutemo pasocial media maakaundi kufumura matsotsi akaita sevanotengesa zvinodhaka nevanodheerera vana.
Iyo INTERPOL inoitira izvi kune matsotsi anotsvaga hupoteri munyika isiri yavo. INTERPOL inosunga vanhu vakadaro uye inowana nzira yekuvadzosera kumusha kwavo kunotarisana nemutemo.
Inozivisa kuti INTERPOL Inoshandisa Mukutaurirana
Rimwe remabasa akakosha e INTERPOL kugovana dhata nemapurisa enhengo dzenyika. Izvi zvakakosha kuteedzera matsotsi mune chero nyika yavanoedza kuvanda mairi. Imwe yenzira iyo INTERPOL inogovera dhata rekutevera matsotsi nekutumira mavara-akanyorwa makodhi.
Aya maziviso ese anopfuura meseji dzakasiyana.
Network: Izvi zvinoratidza kuti mumwe munhu anofungidzirwa mutadzi akakomba. Inotaurira iyo nhengo yenyika iyo tsotsi irimo kuti itarise tsotsi uye riisunge kwenguva pfupi. Gare gare, iyo inhengo yenyika inogona kumusunungura iye kuenda kumusha kwavo kuburikidza nenzira dzezvematongerwo enyika.
Girinhi: Chiziviso chegirini chakafanana neicho chitsvuku. Izvo zvinotevera maitiro akafanana neiyo Tsvuku. Musiyano uripo pakati peichi chiziviso nerutsvuku ndechekuti mhosva yemupomeri haina kunyanya kuoma. Saka nekudaro, chiziviso chegirini hachirapwa nekukurumidzira seye red ziviso.
Bhuruu: Nyevero yebhuruu inopfuudza iwo meseji wekuti munhu anofungidzirwa tsotsi rinozivikanwa. Inoshandiswa kana kusazivikanwa kwenyaya yemusungwa. INTERPOL inotumira uyu meseji kunhengo dzayo dzenhengo kuti vagogona vese kuve vakatarisa mumiriri. Kana imwe nhengo yenyika yawana munhu anofungidzirwa mukati memiganhu yavo, ivo vanozivisa nyika yekwavanofungidzirwa.
Orenji: Orange inyevero kune imwe nhengo yenyika nezve chiitiko kana munhu anogona kukuvadza runyararo. Semuenzaniso, iyo INTERPOL inogona kuyambira nyika dzenhengo nezvemunhu anogona kuve gandanga. Kana kuti chiitiko chingave chine hukama nehugandanga.
Yera: Ruvara urwu ishoko kunhengo dzenyika kuti dzibatsire kutsvaga munhu asipo anowanzove mudiki. Inogona zvakare kushandiswa kuti vanhu vaone vanhu vasingakwanise kuzvizivisa.
Dema: Izvi zvinoratidza kuti munhu akafa asiri mugari ari mune imwe nyika. Inogona zvakare kushandiswa kuzivisa vamwe vanogona kunge vachitsvaga iye munhu wacho.
Bhadhara International INTERPOL Gweta muUAE
Izvo zvinodikanwa kuti iwe uve nenzira yekuzvidzivirira iwe kana iwe uchinge wakanzi zvisizvo tsotsi tsotsi. Pasina ruzivo rwekuti INTERPOL system inoshanda sei, zvinenge zvichizonetsa kuzvidzivirira. Iko kuomarara kwesisitimu zvakare kunoita kuti zviomere magweta edziviriro ezvematsotsi kubata zvakakodzera.
Ndosaka zvakakosha kuti pakarepo ubhadhare gweta repasi rose rekudzivirira matsotsi.
Amal Khamis Vanotsigira Mumiriri Wezvemitemo iri UAE-based mutemo femu ine ruzivo mukubata ne INTERPOL zvemutemo nyaya. Isu tine hunyanzvi muInterpol Notices uye Alerts kubva kuUAE Ministry yekune dzimwe nyika izvo zvinopihwa neInterpol neDubai Mapurisa. Chikwata chedu chemagweta ekudzivirira mhosva anozvipira kuchengetedza kodzero nerusununguko rwevatengi vedu. Saka unogona kuva nechokwadi chekuti ne kutaura nesu, isu tichashanda padhuze newe kuona kuti nyaya dzese dzagadziriswa.